काठमाडौं, ५ कात्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले सरकारको परराष्ट्रनीति देखि विद्रोही विप्लवप्रति सरकारको निितबारे सनसनीपूर्ण खुलासहरु गरेका छन्
चुनाव बहिष्कार गर्नेसँग कार्यगत एकता- सीपी गजुरेल, नेता, माओवादी क्रान्तिकारी
काठमाडौं, ५ कात्तिक । माओवादी क्रान्तिकारीका नेता सीपी गजुरेल विद्रोही स्वभावका छन् । शान्ति प्रक्रियायता कुनैपनि चुनावमा भाग नलिएका उनको दल अहिले पनि चुनाव बहिष्कारको पक्षमा छन् । गजुरेलसँग नेपाली
काठमाडौं, ४ कात्तिक । समाजवादी पार्टी नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ विचारको राजनीतिक गर्छन् । उनले वर्तमान सरकारमा पार्टीको सहभागिता कहिलेसम्म हुनेबारे सनसनीपूर्ण खुलासा गरेका छन् । उनीसँग एनआरएन रेडियोको नेपाली
हाम्रो देशका सभामुख कारबाहीमा पर्दा विदेशीले विज्ञप्ति निकाल्ने !- लेखनाथ न्यौपाने, नेकपा नेता
काठमाडौं, ४ कात्तिक । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता लेखनाथ न्यौपानेसँग विद्यार्थी राजनीति देखिको लामो अनुभव छ । बौद्धिक नेताको परिचय बनाएका न्यौपानेसँग एनआरएन रेडियोको नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलाले गरेको
काठमाडौं, २ कात्तिक । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता दीनानाथ शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री हुनुभएको बताएका छन् । उनीसँग सरकार संचालन र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे नेपाली
काठमाडौं, २ कात्तिक । नेपाली काँग्रेसका नेता ब्रजकिशोर सिंह मोहमद अफताब आलमविरुद्ध षड्यन्त्र गरिएको आरोप लगाउँछन् । उनीसँग नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः रौतहटको अवस्था
युरोपियन युनीयन जाति, वर्ण र क्षेत्रको द्धन्द्ध चर्काउन लागे- चित्रबहादुर केसी
काठमाडौं, १ कात्तिक राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसी खरो बोल्छन् । राजनीतिक अडान लिएर अगाडि बढ्ने स्वभावका उनीसँग नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः अहिले देशको
काठमाडौ, १ कात्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाकार डा. कुन्दन अर्यालले नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसँग यथास्थितिमा वार्ता हुन नसक्ने बताएका छन् । उनीसँग नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसका लागि
काठमाडौं, ३० असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली खरो स्वभावका छन् । मनमा लागेको प्रष्ट बोल्ने उनले सरकारमा मन्त्रीहरुको फेरबदललगायतका विषयमा ऋषि धमलासँग बुधबार विशेष कुराकानी गरेका छन् । उनीसँगको
सभामुख नेपाली काँग्रेसले पाउनुपर्छ- देउवा
काठमाडौं, ३० असोज । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले फेरि आफू सभापति बन्ने बताएका छन् । उनले सभामुखमा पनि नेपाली काँग्रेसको दाबी रहेको खुलाए । उनीसँग बुधबार ऋषि धमलाले प्राइम
मन्त्रीहरुको फेरबदलको दिशामा बढ्न लागेको झलनाथ खनालको खुलासा
काठमाडौं, ३० असोज । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सरकारको समिक्षा भइरहेको बताएका छन् । उनले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुको फेरबदलको दिशामा बढ्ने खुलासा गरे ।